Lenge Ihe ịma aka gbasara mkpokọta Pokémon GO: Kedu ihe ọ bụ na otu esi eji ya eme ihe? ❤️ GOLUEGO.COM
emelitere ikpeazụ Ọnwa Mbụ 6, 2021
Ihe ịma aka nchịkọta a na Pokémon GO Nke a bụ ihe ndị obodo na-achọsi ike, na-amaghị ama, iji nweta ụdị ọhụrụ ahụ site na mpaghara Unova.
Mana nke ahụ abụghị ihe niile, Niantic kpebiri ịchịkọta ụdị Ọgbọ nke Ise (ihe a tụrụ anya na ọ ga-adịtụ anya), ihe ọhụụ a nke ga - ewetakwa anyị nso nso na pokémon nke mpaghara ndị anyị maralarị.
Mkpokọta llema Aka na Pokémon GO Ndị Niantic ekwuputala ya na mbụ, mana ọ bụ rue mgbe ọ pụtara na aha maka ekwentị mkpanaaka gam akporo na iOS, ka ha nyere nkọwa banyere atụmatụ ọhụrụ a nke na-ekwe nkwa ịbụ ikuku dị ọhụrụ iji pụọ na monotony na nke a kpochiri ya.
Dabere na ndị mmepe n'onwe ha, a na-ahazi llema Aka Nchịkọta maka ndị mbido na ndị ọkachamara nwere ahụmịhe ga-enye anyị ohere ịme ka ọrụ anyị ka mma.
Ebumnobi ga-abụ ịchụ nta ụfọdụ ụdị iji meziwanye Nchịkọta Nchịkọta Ndị Ọchịchị anyị. Nke a, dịka kalenda gọọmentị, ga-adịgide ụbọchị ole na ole rue Jenụwarị 10.
Pokémon dị n'oge Nchịkọta Mkpokọta na Pokémon GO -Teselia
Ihe ndị a bụ ụgwọ ọrụ
Egwuregwu Pokeballs 30
5 Candies dị ụkọ
Ọganihu maka Medal Collector's Medal
Otu esi amalite startma Aka
Iji malite Chama Aka Mkpokọta na Pokémon GO, anyị ga-emeghe echiche nke Taa, ebe anyị nwere ike ịhụ pokémon nke bụ akụkụ nke ihe ịma aka ọ bụla.
Dabere na Niantic, nsogbu ndị a ga-akwụsị na ngwụcha nke mmemme egwuregwu, yabụ na-akpọ anyị oku ijide ụdị niile. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịnweta ụgwọ ọrụ niile ma tinye ha na baajị Elite Pokécollector ọhụrụ.
Ọhụrụ Brawler Iwu General nke oghere na-eru nso
Otu esi emeri Regisvid Cryo na Genshin Impact